Nayakhabar.com: फेसबुकमा भाइरल यो फोटो कहाँको हो ?
फेसबुकमा भाइरल यो फोटो कहाँको हो ?
असारको चुहुँदो झरीमा सरकारी निकायहरु सडक पिच गर्ने काममा धमाधम लागिरहेका छन् । सरकार आफैं सडक पिच गर्ने नाममा बालुवामा पानी हालेसरह १५ दिनमा एक अर्ब सक्ने ध्याउन्नमा छ ।
सरकारी निकायले आज गरेको पिच भोलि आउने वर्षेभेलले बगाएर लगिरहेका बेला केही दिनयता एउ
टा फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मिल्ने यो फोटोलाई फेसबुक र ट्वीटरमा अपलोड गरेर सरकारी निकायको धज्जी उडाउने क्रम जारी छ ।
एक युवकले पिच सडकको एक पत्रलाई तन्ना उठाएसरह उठाइरहेका छन् । यो फोटोलाई धेरैले नेपालकै भनिरहेका छन् ।
नेपालमै कुनै समय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छेडेका केदार खड्काले फोटोलाई यहीँको भएको आशयसहित यस्तो ठैक्का स्वीकृत गर्ने कर्मचारी, बिल पास गर्न‍े इन्जिनिय र ठेकेदारप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि अहिले भाइरल भएको छ ।
उनको फेबुक वालबाट मात्रै २४ घन्टाभित्र ३ हजार पाँच सय ६७ पटक यो फोटो सेयर भइसकेको छ ।
बिहारमा समेत यही फोटो त्यहीँ भएको भन्दै भाइरल बनाइएपछि त्यहाँका कार्यवहाम मुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवले ट्वीट गरेर खण्डन गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको यो फोटो बिहारको नभइ बंगलादेशको भएको पुष्टि गरेका छन् । उनले #मत_बदनाम_करो_बिहार_को ट्वीट ट्रेन्ड नै चलाएर बिहारको बदनाम नगर्न सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई अपिल गरेका छन् ।